8-da ugu Fiican ee WooCommerce Email Customizer Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/8-da ugu Fiican ee WooCommerce Email Customizer Plugins
8-da ugu Fiican ee WooCommerce Email Customizer Plugins
Iimaylku wuxuu kaa caawinayaa inaad si firfircoon ula macaamilto macaamiishaada. Dhammaan cusbooneysiintii ugu dambeysay iyo heerka hadda ee dalabkooda waxaa lagu gaarsiin karaa iimaylo. Laakiin ma jirto sabab loo isticmaalo qaab-dhismeedka caajiska ah ee ku jira WooCommerce. Sidaa darteed, habaynta iimayladan waa arrin lama huraan ah.
Haddii iimaylkaagu si wanaagsan loogu habeeyey dhagaystayaashaada, markaa waxaad filan kartaa natiijooyin wanaagsan. Maanta, waxaa jira bakhaarro badan oo email customizer plugins ah oo diyaar u ah dukaanka WooCommerce, waxaanan eegi doonaa qaar ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa. Xirmooyinkan gaarka ah waxay kuu oggolaanayaan inaad abuurto iimaylo muuqaal ah oo soo jiidasho leh, kuwaas oo bixiya khibrad isticmaale oo wanaagsan oo kordhin kara beddelka.
Waa maxay sababta aad u habaynayso iimayladaga WordPress?
Habaynta iimaylada WooCommerce waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah ka-qaybgalka isticmaalaha. Qaababka iimaylka WooCommerce ee caadiga ah wuxuu noqday caajis. Marka ay tignoolajiyada cusubi soo cusboonaato iyo astaamo cusub ayaa imanaya, waxa lama huraan noqonaysa in la hirgeliyo habab la habeeyey.
Marka iimaylada la habeeyo, waxay siisaa faa'iidooyin badan isticmaalayaasha sida kor u kaca wacyiga summada, kalsoonida, iyo qaar kaloo badan. Waxay kaloo ka caawin kartaa milkiilayaasha dukaamada inay xoojiyaan xiriirka macaamiisha.
Markaad isticmaalayso iimaylka caadiga ah, mulkiilayaasha dukaanku uma faahfaahin karaan tafaasiisha summada macaamiisha si habboon. Laakiin isla mar ahaantaana, iimaylka la habeeyey ayaa u ogolaanaya inay ku gudbiyaan tafaasiisha ganacsigooda qaab qaabaysan oo ku habboon astaantaada.
Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in la habeeyo iimayladaada sida ku cad qaabka summada iyo dookhyada macmiilka. Waxay kordhisaa heerka beddelka waxayna yaraynaysaa fursada isdhexgalka hoose. Marka heerka beddelka iyo isdhexgalka uu kordho, ka dibna si toos ah, heerka faa'iidada ganacsigu wuxuu bilaabmaa inuu kordho.
Hadda aan eegno 8 ka mid ah plugins-ka email-ka ee WooCommerce ee bilaashka ah uguna sarreeya si loo rakibo markaad dukaanka khadka ah ku dhisto WooCommerce.
Email Customizer-ka WooCommerce plugin ee uu qoray Themehigh wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto iimaylo la habeeyey adoo isticmaalaya tifaftiraha qaab muuqaal ah. Plugin waxaa ku jira astaamo badan oo kaa caawinaya inaad abuurto iimaylo cajiib ah oo leh sawirro, badhamada, Gif, iwm.
Sameeyaha iimaylka ee WooCommerce waa dhise nool oo ku tusaya dhammaan isbeddellada lagu sameeyay waqtiga dhabta ah. Xulashada boostada tijaabada ee plugin waxay ka caawisaa isticmaalayaashu inay arkaan qaab-dhismeedka la sameeyay iyagoo u diraya aqoonsi kasta oo boosto ah. Sida aad u habayn karto iimaylka WooCommerce kasta adoo isticmaalaya plugin this, ku rakibida plugin waligeed ma noqon doonto ikhtiyaar xun.
Sidoo kale, plugin-ku wuxuu bixiyaa nooca bilaashka ah iyo midka ugu sarreeya labadaba. Kaliya dooro nooca sida aad doorbidayso, iyo baahiyaha ganacsi. Ka faa'iidayso astaamaha furaha oo kor u qaad xeeladaha suuqgeynta iimaylka heerkeeda xiga.
Waxaa ku jira 15+ walxood sida qoraal, sawirro, GIF, astaanta warbaahinta bulshada, iyo wixii la mid ah.
Horudhac toos ah oo isbedelada
Ikhtiyaarka ah in lagu daro fariimaha badan ee iimaylka
Tusaya ciwaanka macmiilka iyo macluumaadka
Ikhtiyaarka lagu daro jillaabyada e-mayliyada e-commerce
Tijaabi adoo diraya iimaylo
Ku dar khadadka mawduuca firfircoon & nuxurka adoo isticmaalaya boos-hayeyaasha
Waafaqsanaanta badankooda WooCommerce plugins
YayMail ee YayCommerce waa habeeyaha iimaylka WooCommerce kale oo aad u fiican. Waxay bixisaa astaamo badan oo lagu daro summeyntaada oo ay ka dhigto iimaylka WooCommerce mid xirfad leh.
Ka dib marka la rakibo, waxaad yeelan doontaa tiro badan oo ikhtiyaari ah ku dar calaamad gaar ah, badhamada, qoraalka, cinwaanka, calaamadaha, muqaalka, liiska sawirka, sanduuqa sawirka, liiska qoraalka, tiirarka, qaybiyayaal, ciwaanka rarida, ciwaanka biilasha, dalbashada alaabta iyo wax ka badan . Kadib dooro qaabka iimaylka aad rabto in naqshadaada lagu dabaqo (sida Amarka Cusub, Amarka La Joojiyay, Dalabka La Soo Celiyay, iwm). Waxa kale oo aad soo diri kartaa iimaylka tijaabada ah si aad u aragto sida templateka cusub u ekaado sanduuqa macmiilka.
Habbee iimaylada dalabaadka: cusub, tirtiray, guuldarraystay, hadhid, habayn, dhamaystiran, lacag celin
Habee iimaylada macmiilka: qaansheegta, note, xisaab cusub, dib u dejin furaha sirta ah
Jiid oo tuur interface-ka horudhaca tooska ah
Si fudud loo isticmaalo koodhadhka gaaban ee macluumaadka iimaylka
Nooca Pro ee la cusboonaysiiyay oo wata xulashooyin lagu daray farta, midabada asalka, suufka, iyo in ka badan
3. Qurxiyaha WooCommerce Email Customizer
Qurxiyaha WooCommerce Iimayl-ka-beddelaha waa plugin beddelaha iimaylka uu sameeyay WebToffee. Waa plugin bilaash ah, iyo adiga oo isticmaalaya plugingan, waxaad ku keeni kartaa isbeddelada loo baahan yahay iimaylada WooCommerce.
Plugin-ku wuxuu bixiyaa astaamo dhowr ah oo lagu beddelayo qaabka madaxa iyo cagaha, cinwaannada, ku dar qaabab gaar ah, iwm. Waxaad sidoo kale beddeli kartaa qoyska font, qaabka, midabka qoraalka, oo waxaad ku dari kartaa sawirrada qaybta madaxa. Maaddaama plugin ay bixiso muuqaal horudhac toos ah, isticmaaluhu wuxuu arki karaa isbeddelada waqtiga-dhabta ah, isaga / iyadu waxay noqon doontaa mid aad u raaxaysan marka la abuurayo qaabka emailka.
Habaynta iimaylka fudud
Beddela nuxurka hoose
Ikhtiyaarka in lagu daro fariimo badan iimaylka
Hawlaha u gaarka ah WordPress
Beddel qaabka iyo midabada farta
Muuqaalka Hordhaca Tooska ah
4. Kadence WooCommerce Iimayl Naqshadeeye
Naqshadeeyaha Iimaylka Kadence WooCommerce wuxuu kuu oggolaanayaa inaad habayso qaab-dhismeedka iimaylka WooCommerce ee caadiga ah. Waxaad xitaa habeyn kartaa qoraalka jirka iyo qaab-dhismeedka adiga oo aan ogeyn hal xariiq oo kood ah.
Wax ka beddel qaabka, qaababka xarfaha, midabka, iyo wax ka badan oo iimaylka ah si aad ugu habboonaato astaantaada. Adigoo isticmaalaya plugin-ka, waxaad wax ka beddeli kartaa ciwaanka, cinwaan-hoosaadka, iyo qaar kaloo badan. Plugin sidoo kale waxay la socotaa ikhtiyaarka lagu soo dejiyo naqshadaha iimaylka ee horay loo dhisay.
Sifooyinkan ka sokow, Kadence sidoo kale waxay bixisaa horudhac toos ah oo ay ku jirto ikhtiyaarka lagu diro iimayllada tijaabada ah.
Soo dejinta/dhoofinta fudud
Ikhtiyaarka dirida fariimaha tijaabada
Habbee cabbirka farta, midabka farta, midabka farta, iyo qaar kaloo badan
Wuxuu muujiyaa horudhac toos ah
Habbee qoraal hoosaadka, ciwaanka, iyo qoraalka jidhka
YITH WooCommerce Email Templates plugin wuxuu kuu oggolaanayaa inaad habayso oo aad ku maamusho iimaylladaada muuqaal xirfad leh. Waxay kaa caawinaysaa inaad ka dhigto qaab-dhismeedka iimaylka mid sax ah oo leh faahfaahinta summadaada la xidhiidha sida summada, madaxa, astaanta bulshada, cagaha, iyo qaar kaloo badan.
Sidoo kale, waxaad wax ka beddeli kartaa farta, midabka qoraalka, iyo qaabaynta adoo isticmaalaya plugin WooCommerce. Tirada faraha badan ee sifooyinku waxay awood kuu siinaysaa inaad abuurto naqshad soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Maaddaama plugin-ku uu bixiyo qaab-dhismeedyo badan oo uu tuso hor-u-eegga template-ka la qorsheeyay, waxay ka caawisaa isticmaalayaasha inay si fiican u fahmaan template-ka.
Afar nooc oo kala duwan ayaa diyaar ah.
Wuxuu soo bandhigayaa horudhaca qaab-dhismeedka
Ku dar cagaha kala duwan qaab-dhismeedka kasta.
Ikhtiyaarada lagu daro baraha bulshada
Furaha Mailpoet waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo WordPress iyo WooCommerce labadaba. Waxay kaa caawinaysaa inaad abuurto iimaylo, wargeysyo, ogeysiisyo, iwm.
Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa isticmaaluhu inuu soo saaro iimaylada ku habboon sumaddooda. Tafatirka jiidida iyo tuurista ayaa fududaynaysa habaynta. Dhammaan tafatirka muhiimka ah sida xarfaha, midabada, iyo arrimo kale ayaa lagu maareyn karaa plugin.
Haddii aad isku dayeyso inaad kor u qaaddo tayada istaraatiijiyadda suuq-geynta iimaylka, markaa Mailpoint ayaa adiga kugu habboon. Sidoo kale, waxa la odhan karaa sida xidhmo-dhan-hal ah oo loogu talagalay istaraatijiyadda suuq-geynta iimaylka.
Automation iyo kala qaybinta
Jiid fudud oo tuuris beddelka
Ku darida sawirada
Xidhmada-dhan-hal-ku-galka ah ee suuq-geynta iimaylka
7. Naqshadeeye iimaylka Muuqaal ee WooCommerce
Naqshadeeye iimaylka Visual ee WooCommerce ee Smackcodes wuxuu kuu ogolaanayaa inaad naqshadayso iimaylka leh qaab jiidid iyo jiid fudud. Iyo plugin, waxaad xitaa abuuri kartaa iimayladaada sida ku cad heerka dalabka.
Ka sokow nooca bilaashka ah, plugin sidoo kale waxaa ku jira nooc premium ah oo leh tiro astaamo ah oo ka ballaaran nooca bilaashka ah. Naqshadeeye iimaylka Visual ee plugin WooCommerce wuxuu badbaadiyaa shaqada isla markaaba wuxuuna kaa caawinayaa inaad soo celiso shaqooyinka aan la keydin.
Plugin-ku waxa kale oo ka mid ah badeeco gaar ah oo la keenay iyo qaab iimaylka u dhigma oo aad habayn karto oo aad macaamiisha ka dhigi karto in ay ogaadaan in alaabtooda si badbaado leh loo keenay.
Horudhac iimaylka, ku darista summada summada, xarfaha gaarka ah, iyo beddelka midabka asalka ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha furaha.
Habka jiidid iyo tuurista fudud
Hababka waxka beddelka ee kala duwan sida ku-darka sawirrada, isku-xidhka, madaxa, iyo wax badan oo kale
Awood u leh inuu habeeyo iimaylada ku salaysan qaybta iyo badeecada
Waxay kaa caawinaysaa inaad dirto iimaylo ku salaysan badeecada iyo qaybta.
Ikhtiyaarka si aad u saxiixdo iimaylka si elektaroonig ah
8. Iimeyl-ka-habeeyaha WooCommerce oo leh Jiid & Dhisme
Isbeddelka Iimayl-ka ee WooCommerce wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku beddelato xaalad kasta oo dalbashada leh jiidida iyo tuurista fudud ee emaylka.
Waxaad ka dhigi kartaa iimaylka mid habaysan adoo ku daraya sawirro, qoraalo, madax, cag, astaamo bulsho, iyo wixii la mid ah. Xulashada horudhaca tooska ah ee plugin waxay u ogolaataa isticmaalayaashu inay arkaan isbeddelada wakhtiga dhabta ah.
Maadaama ay la mid tahay bog dhise leh habka jiidida iyo tuurista, waxaad u qaabayn kartaa iimayladaada si dadaal la'aan ah. Oo ay la socdaan 15+ walxood, plugin sidoo kale waxaa ku jira sifada lagu daro koodhadhka gaaban, si iimaylka uu u noqdo mid qurux badan oo soo jiidasho leh.
Jiid oo tuur email-dhise
Waxaa ku jira macluumaadka macmiilka iyo faahfaahinta dalabka
Ikhtiyaarka lagu xaqiijinayo iimaylka adoo tijaabinaya
Wuxuu ka kooban yahay 15+ walxood si loo naqshadeeyo iimaylka
Xog & Soo dejiso
Isbeddelka Iimayl-ka WooCommerce wuxuu kuu oggolaanayaa inaad naqshadayso iimaylada ay tahay inuu macmiilkaagu helo. Qalabkan WordPress-ku-dhismay waxa uu beddeli karaa naqshadda qaab-dhismeedka iimaylka.
Adigoo isticmaalaya plugin, waxaad ka shaqayn kartaa madaxa iimaylka, jidhka iimaylka, iimaylka footer, iyo xataa soo dir fariimaha tijaabada ah. Sidoo kale, cabbirka farta, midabka qoraalka, iyo midabka asalka ayaa lagu dari karaa oo lagu tafatiri karaa plugin.
Sida plugin-ku kuu ogolaado inaad sawirro ku darto, waxay ka dhigaysaa iimaylka mid soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sawirada la xidhiidha astaantaada, taas oo kaa caawinaysa inaad si hufan u bixiso faahfaahinta.
Uma baahna wax aqoon kood ah
Ku dar sawirro
Beddel asalka madaxa, midabka qoraalka, iyo cabbirka qoraalka.
Sida ra'yigayaga ah, kuwani waa kuwa ugu sarreeya ee bilaashka ah iyo qiimaha WooCommerce Email Customizer plugins ee laga heli karo suuqa. Adigoo isticmaalaya astaamaha plugin ee xeeladaha suuq-geynta iimaylka, waxa laga yaabaa inay gaadho heerkeeda ku xiga oo beddelaad fiican leh.
Sidaa darteed, dooro mid kasta oo WooCommerce email customizer plugins sida aad doorbidayso. Si aad u habayn karto iimaylada ku salaysan qaabka astaanta oo aad joojiso dirida iimaylada qaabka caadiga ah.
Laakin ka hor intaadan dooran mid ka mid ah plugins-yada dukaankaaga ama mareegahaaga, samee baaritaan sax ah oo ku saabsan iyaga oo falanqee haddii ay ku habboon tahay baahiyahaaga. Markaa, ma jiri doonto arrin mustaqbalka.
Google wuxuu baarayaa ficillada gacanta ee maqan
Sida loo Isticmaalo Hantidhawrka Iftiinka Google si loo hagaajiyo Xawaaraha